६० घरधुरीलाई स्याङ्गजा विरुवा–२ गाबु डाँडाका भू.पू. द्धारा राहत वितरण -
२४ भाद्रा २०७७ पोखरा
स्याङ्गजा विरुवा गाउँपालिका–२, गाबु डाँडाका पोखराबासीहरुलाई राहत वितरण गरिएको छ । कोरोनाको कहरमा अध्यायन तथा रोजगारको शिलशिलामा पोखरामा रही हाल रोजगार गुमाएका तथा आर्थिक अवस्था कम्जोर भएकाहरुलाई वितरण गरिएको हो । पोखराको मिलनटोलमा अवस्थीत राहत कार्यक्रम संयोजक डिल बहादुर गुरुङ्गको घरबाटा २३ जनालाई एक बोरा चामल, १ के.जी. (नुन, दाल र तेल) वितरण गरिएको हो ।
गाबुडाँडा जन्मेर हुर्किएको आफ्नो ठाउँ जो कोहिलाई पनि प्यारो लाग्छ । आफ्नो भविष्य आर्मीमा समर्पित गरि अवकास लिएका यु.के.देखी पोखरा सम्मका भू.पू.हरु द्धारा राहत वितरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । आर्थिक अवस्था कम्जोर भएका, जन्म गाउँको माया, सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन राहत कार्यक्रम ल्याएको संयोजक डिलबहदुर गुरुङ्गले जानकारी गराए । त्यस्तै गाउँबासीहरुलाई हरेक कार्यहरुमा अझ सहयोग गर्ने बाचा गर्नुभएको थियो ।
गाउँ देखी पोखरा सम्मका जम्मा ६० घरधुरीलाई राहात वितरण गएको थियो । जसमा ३७ घरधुरी गाउँ र २३ घरधुरी पोखरामा बसेकाहरु थिए । राहत पाउने महानुभावहरले खुसी हुदै राहतको महसुस भएको बताएका थिए । सोही अवसरमा राहत प्रप्त गरेकाहरु मध्ये विष्णु प्रसाद गुरुङ्गले सम्पूर्ण सहयोगी मनहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम गाबु झागडी सम्पर्क मञ्च र श्री कमल चक्र युवा क्लबको आयोजनामा गरिएको थियो भने राष्ट्रिय युवा संघ स्याङ्गजा जिल्ला संयोजक थमन गुरुङ्गले कार्यक्रमको सहजिकरण गरेको थियो ।
Previous स्यङ्गजाको विरुवामा भू.पू सैनिकहरु द्धारा राहत वितरण
Next हामी गर्न सक्छौ सहयोगी हातहरुले संविधान दिवसको अवसरमा जुस वितरण
निर्माणधिन गोर्खा स्मारक स्थलमा अवलोक भ्रमण
भेजा उठाएर सामाजिक पुजा
सञ्चारकर्मी अपिल त्रिपाठी अस्पताल भर्ना
बिभाजन तिर ज स पा
2 months ago आस्तिक रोशन
3 months ago Indra Mani Pandey